ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေသော အမူအကျင့် (၁၀)မျိုး - Amawpyay
ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင် တာကြောင့် ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ အမူအကျင့်(၁၀)မျိုး
ကျောက်ကပ်က သွေးကြော ထဲမှာ လှည့်ပတ်နေတဲ့သွေးတွေကို သန့်စင်အောင် စစ်ထုတ်ပေးပြီး အစားအစာတွေ ကနေ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်တွေကို စုပ်ယူကာ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ ကို ထောက်ပံ့ပေး ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ အပြင် ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း ကူညီပေး ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးက ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ် လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့နေ့စဉ် အမူအကျင့်တွေ ထဲကနေ ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေး ပျက်စီးစေမယ့် အပြုအမူတွေကို ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ် အလုံအလောက် ရရှိမှ ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ် နိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်ပေါ့။
ရေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားပေး တဲ့နေရာမှာ အရမ်းအကူအညီဖြစ်တာကြောင့် ကျောက်ကပ်မှာကျောက် မတည်အောင် တားဆီးပေး နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လိုအပ်တာထက် အလွန်အကျွံသောက် တာလည်း မကောင်းပါဘူး။ တစ်ရက်မှာ ရေနှစ်လီ တာလောက်သောက် ရင်အတော်ပါပဲ။
နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အခါ၊ တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ အခါတွေမှာ ဆေးတွေကိုသောက်ချင်သလိုသောက်တဲ့အကျင့် ကလည်း ကျောက်ကပ် ပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲက တစ်ချက်ပါပဲ။
ဆေးမြီးတိုတွေအရမ်းသောက်ရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဆေးသောက်တော့မယ်ဆို ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်သောက်ချင် သလို မသောက်ပါနဲ့၊ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သေချာ လိုက်နာပြီးသောက်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်က ဆိုဒီယမ် ၂၃၀၀မီလီဂရမ်လောက် ပဲစားသုံးသင့်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဌာန ထုတ်ပြန်ထား ခဲ့ပေမယ့် လူတိုင်းက အဲ့ဒီ ပမာဏထက်ပိုအောင်စားသောက်နေကြ ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း အစားအစာတွေမှာ ဆိုဒီယမ် ပမာဏများများ ထည့်ပြီး အရသာ ပိုရှိအောင်ထုတ်လုပ် တာကို လူတွေက အရမ်းကြိုက်ကြ ပါတယ်။ ဆိုဒီယမ်စားသုံးမှု များတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအငန်ဓာတ်တွေ အရမ်းများလာပြီး
ကျောက်ကပ်ကသန့်စင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ ကျောက်ကပ် ထိခိုက် လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အငန်ဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေ ကိုလျှော့စားပြီး အသီးအနှံနဲ့အရွက်စိမ်းတွေကိုလည်းသင့်တင့်သလောက်စားပေးပါ။
ကျန်းမာရေးလိုက်စားသည်ဖြစ်စေ၊ မလိုက်စားသည်ဖြစ်စေ သွေးဖိအားတိုင်းတာကိုမကြာခဏလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သွေးဖိအား များတယ် ဆိုတာ နှလုံးသွေးကြောနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြဿနာ ရှိနေတာဖြစ်ပြီး
သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်လာရင်သွေးလွှတ်ကြောတွေ ကျဉ်းမြောင်း လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရောနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ စုပုံလာပြီး ဒါကို ကျောက်ကပ်ကသန့်စင်နိုင်စွမ်းနည်းလာပါတယ်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင် ရာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ အခါ ကျောက်ကပ် တစ်သျှူးတွေက လိုအပ်တဲ့အာဟာ ရတွေကို ကောင်းကောင်း မစုပ်ယူနိုင်တော့ဘဲ ကျောက်ကပ်မှာ ထိခိုက်လာပါတယ်။
(၅) ဆီးသွားချင်တာကို အချိန်အကြာကြီးအောင့် ထားတတ်တယ်
ဆီးအိတ္က အရည်နှစ်ခွက်စာ ပမာဏကို သုံးနာရီကနေ၊လေးနာရီ အထိ ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ တခါတေလ သန့်စင်ခန်း မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဆီးသွားချင် လာတာကို
အချိန်တွေအကြာကြီးအောင့်ထား လိုက်တဲ့အခါ ကျောက်ကပ်မှာ ထိခိုက်ပျက်စီး မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး မကြာခဏ ဆီးသွားချင် တာမျိုးဖြစ် လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင် တင်ပါးဆုံရိုးနဲ့ ပတ်သက် တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အငန်တွေအရမ်းစားတဲ့ အခါ ကျောက်ကပ်က အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားနိုင် စွမ်းနည်းလာသလိုပဲ ၊ အချိုနဲ့သရေစာတွေ အလွန်အကျွံစား တာကလည်း အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်စေတာကြောင့် ကျောက်ကပ် ကိုပျက်စီးစေနို င်ပါတယ်။
သင်ဟာ အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူဆိုရင် အဲ့ဒီအရာတွေ ကနေ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ ကယ်မီကယ်တွေ ထုတ်လွှတ် နိုင်ပြီး ကျောက်ကပ်က အဲ့ဒါတွေကို ချေဖျက် သန့်စင်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ တဲ့အခါ ထိခိုက်ပျက်စီး လာပါတယ်။
အနီရောင်အသားတွေက သံဓာတ်နဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ကို အပြည့်အဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အမိုးနီးယားနဲ့ နိုက်ထရိုဂျင် ဓာတ်တွေလည်း ပါနေတာကြောင့် နေ့တိုင်းစားရင် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနို င်ပါတယ်။
အထိုင်များပြီးလေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်တာက ဆီးချိုရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ နဲ့ Heart attack တွေဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ရက်မှာ ၈နာရီနဲ့ အထက် ထိုင်တဲ့ သူတွေဟာ တခြားသူတွေထက်ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပို များပါတယ်။
ညဘက်မှာကောင်းကောင်းအိပ်မှ နောက်နေ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အားအင်ပြည့်ဝမှာပါ။ တကယ်လို့ အိပ်ချိန် မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် သွေးလှည့်ပတ် မှုမကောင်းတော့ဘဲ၊ သွေးဖိအားများလာမယ်၊ အဲ့ဒါက ကျောက်ကပ်ကို သွားထိခိုက်စေ ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုံမှန်အိပ်ချိန်အတိုင်းကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အယ်ကိုဟောကြောင့် ပြောင်းလဲလာရသော ဦးနှောက်၏ လုပ်ဆောင်မှုများ
အယ်ကိုဟောကြောင့် ပြောင်းလဲလာရသော ဦးနှောက်၏ လုပ်ဆောင်မှုများ Livolin forte အသည်းအားဆေး ကြော်ငြာလို ပြောရရင်တော့ ကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ မကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ် အရက်ကို သောက်တတ်ကြ ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု စဉ်ကဲ့ပြောင်းလဲခြင်း လှိုင်းဒဏ်ကြောင့်လဲ မြန်မာလူငယ်အများစုဟာ အရက်ကို ပိုလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သောက်လာကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေလဲ အရက်ပြင်းကြီးတွေ မဟုတ်ရင်တောင် ဝိုင် ၊ ဘီယာတို့လောက်တော့ ပေါ်တင် သောက်လာကြပါပြီ။ ဆိုတော့… အယ်ကိုဟော ဟာ ဦးနှောက်ကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်ပါလဲ? ကောင်းတာများလား? ဆိုးတာများလား? ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်… ။ ၁။ အရက်ဟာ ဦးနှောက်ကို လေးလံစေတယ် Glutamate လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင် …